August 2008 ~ စန္ဒကူး
Fruits for the Wilds
မတည့်တဲ့အစာတွေဆိုစားချင်တာသေတော့မယ်။ အခုလဲမှို၊ မှိုတောင်မှခါတိုင်းစားတဲ့ငွေနှင်းမှို
မဟုတ်ဘူး။ ကောက်ရိုးမှို၊ အဲဒါကဒီမှာမရောင်းဘူး၊ တစ်ခါတစ်လေတောင်ပေါ်တက်တဲ့ကျောင်း
ကောက်ရိုးမှိုကြီးကြီး - ၅ ပွင့်
ကြက်သွန်ဖြူ - ၄ မွှာ
ခရမ်းချဉ်သီး - ၁ လုံး (မမှည့်တစ်မှည့်)
ငရုတ်သီးစိမ်းတောင့်ရှည် - ၁ တောင့်
ဆီပူပူမှာ ကြက်သွန်ဖြူကိုဓါးပြာရိုက်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ ခရမ်းချဉ်သီးကိုလဲမခွံနွှာထည့်ပါတယ်။ နဲနဲ
လေးများချဉ်မလားလို့၊ ပြီးတော့ငရုတ်သီးစိမ်းတောင့်ရှည်ကိုအမြောင်းလိုက်လှီးထည့်ပြီး သန့်စင်ပြီး
မှိုတွေထည့်ဆားနဲငယ်ထည့်ပြီး ချိုမှုန့်နဲနဲထည့်၊ မထည့်လဲချိုနေပြီ။ ပြီးရင်မွှေ..ကျက်လောက်ပီဆိုရင်
ဒါဘဲလားဆိုတော့မပီးသေးပါဘူး။ မုန်လာထုတ်ကိုလက်တစ်ဆစ်စာလောက်လှီးပြီး၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ မျှင်
ငပိ၊ ငရုတ်ကောင်းနိုင်နိုင်နဲ့ဟင်းခါးချက်သောက်ပါသေးတယ်။ ကျက်ခါနီးပွက်ပွက်ဆူမှငွေနှင်းမှိုလေး
တွေခတ်လိုက်ရုံပါဘဲ။ အရမ်းကိုသောက်လို့ကောင်းတဲ့ မှိုမုန်လာထုပ်ဟင်းခါးပါ။...ယုံဝူးဆိုစမ်းကြည့်....
နောက်ဆုံးတော့....ဖျော်ရည်..နာနတ်သီးဖျော်ရည်မှာ ပူတီနံရွက်လေးခတ်ထားတာပါ။ အနံ့လေးကသင်း
နေပီးအရမ်းကိုသောက်လို့ကောင်းပါတယ်။ ဖျော်ရည်မကြိုက်တတ်တဲ့ကျွန်မတောင် (၃)ခွက် အသာလေး
မနေ့ညက ပရီးမီးယားလိဒ် ဘောပွဲနှောက်ယှက်တာနဲ့ မနက် (၂)နာရီလောက်မှအိပ်ဖြစ်
တယ်။ အိပ်ရာနိုးတော့ဗိုက်တော်တော်ဆာနေပီ။ မဆာဘဲနေတော့မလားလေ ၁၂ နာရီ
တောင်ကျော်နေပီ။ မိုးလင်းကတည်းကစဉ်းစားမိတာစားဖို့ပါဘဲ... ဆိုတဲ့သီချင်းလိုဘာ
လက်တင်ပြီးတော့..ဇီးဖြူသီးပြုတ်ထားတာရှိတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်က စင်ကာပူက စေတနာ
ရှင်တစ်ဦးတစ်ကူးတစ်ကပို့ပေးလိုက်တာ...မြန်မာပြည်က export လုပ်တဲ့ဟာတွေဆိုတော့
ဇီးဖြူသီး - ၅ လုံး
မျှင်ငပိ - ဇွန်းတစ်ဝက်
ကြက်သွန်ဖြူ - ၂ မွှာ
ငရုတ်သီးမိုးမျှော် - ၁၀ တောင့်
ဆား နဲ့ အချိုမှုန့်အနဲငယ်... တို့နဲ့ပါ။
ပြီးရင်ကြက်သွန်ဖြူအစိတ်ကြီး ၂ မွှာကိုထည့်ထောင်းပါတယ်။
အားလုံးကြေလောက်တဲ့အခါ မျှင်ငပိကို မီးနဲနဲကင်ပြီးထည့်မွှေလိုက်ပါတယ်။ အပေါ့ငံမြည်းပြီး..အချိုမှုန့်လေးနဲနဲထည့်လိုက်တဲ့အခါ......
ခွက်ထဲထည့်ပြီးချိန်မှာတော့ ဆီလေးအပေါ်ယံနဲနဲလောင်းထည့်လိုက်ပါတယ်။ ပိုစိမ့်သွားတာပေါ့...
စားကြပါအုံး.... အိမ်ကိုသတိရတဲ့အချိန် မိုးအေးအေးမှာ အာလူးအသားဟင်းလေးနဲ့၊ ဇီးဖြူသီးထောင်း
အသုပ်စုံလုပ်ဖို့ကျောက်ကျောရေစိမ်တုန်းက တို့စားဖို့တမင်ဖယ်ထားတာ.. ကီဝီသီးလေးပါ
Posted by စန္ဒကူး at 11:58 AM
ဒီအပတ်ရုံးပိတ်ရက်မှာတော့ စိတ်ကူးပေါက်လို့အသုပ်စုံလုပ်စားမယ်ဆိုပြီး အနားတစ်ဝိုက်က
၀င်တယ်။ တစ်ယောက် ၂မျိုး၃မျိုးခွဲတာဝန်ယူလိုက်ရင်တော့မြန်ပါတယ်။
အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်ကြိုက်တဲ့အရသာအတိုင်း စပ်ဟပ်တည့်အောင်သုပ်စားလိုက်
ရုံပါဘဲ။ ကျွန်မသုပ်ထားတဲ့ပန်းကန်ကိုလာနှိုက်စားသူတွေကများတယ်။ ခဏခဏထပ်သုပ်ရ
ဘူးသီး ကိုကြက်သွန်ဖြူနိုင်နိုင်၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်နိုင်နိုင်နဲ့ ဟင်းခါးလေးချက်ပြီးဝိုင်းစားကြတာ
ဟင်းခါးမလောက်တော့ရေထပ်ထိုးရတဲ့အထိပါ။ ဒါပေမယ့်ဘူးသီးကမရှိတော့တာနဲ့ ဆရာ့အိမ်
Posted by စန္ဒကူး at 11:18 AM
ငယ်ငယ်က ကျွန်မအဖေပြောပြတဲ့ ပုံနားထောင်တတ်တဲ့အရွယ်မှာပထမဆုံးနားထောင်ဖူးပြီး
တစ်ခါတုန်းကရွာတစ်ရွာမှာအရမ်းဆင်းရဲတဲ့အဖွားရယ်၊ မြေးရယ်ရှိသတဲ့။ အဲဒီမြေးလေးကိုမွေးပြီး
ငယ်ငယ်ကတည်းကအရမ်းကိုပျင်းတာ။ တစ်ရက်တစ်ရက်အိပ်မယ်စားမယ်၊ပြီးပြန်အိပ်မယ်၊ အဘွား
ကလဲချစ်တော့ဘာမှမပြောရှာဘူးတဲ့။ မြေးလေးအသက်တစ်ဖြည်းဖြည်းကြီးလာတယ်။ အဘွားလဲ
တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့အိုစာလာတာပေါ့။ အားအင်ချိနဲ့လာတယ်။ အရင်လိုတောထဲထင်းခွေ၊သွားရောင်း၊
ဟင်းရွက်ခူး၊ငါးရှာလုပ်ရတာမလွယ်တော့ဘူး။ သူ့မြေးလေးလဲလူပျိုပေါက်အရွယ်ရောက်နေပီ။ တစ်
ခါမှဘာမှမကူလုပ်ဘူး. အဘွားချက်ကျွေးတာစားတယ်။ ပြီးရင်အိပ်တယ်။ တစ်ကယ့်ကိုငပျင်းလေး
ပေါ့ကွယ်။ တစ်ရက်တော့အဘွားကသူ့မြေးကိုပြောတယ်။ မြေးလေးရေ..မင်းလဲမငယ်တော့ဘူး။
ကိုကူညီတဲ့အနေနဲ့ ရွာစွန်ကချောင်းစပ်မှာဟင်းစားလေးရအောင်ငါးသွားဖမ်းပါကွယ်။ ပိုက်ကွန်လေး
ဆွဲပြီးချောင်းဘက်ကိုထွက်သွားသတဲ့။ ချောင်းနားရောက်တော့ ပိုက်ကွန်ကိုချထားပြီး ချောင်းဘေး
ပိုက်ကွန်နဲ့ငြိပြီး ဖလပ်ဖလပ်နဲ့ ရုန်းနေတဲ့အသံကြောင့်ကောင်လေးကလန့်နိုးလာပြီး ဗျိုင်းတစ်ကောင်
မိတာတွေ့တာနဲ့သွားဖြုတ်၊ ခြေထောက်မှာကြိုးချည်ပြီး ဟေ့..ရွာထဲကိုဝင်သွား..အိမ်ရှေ့မှာအဖီလေး
ချထားပြီး ငါးတွေလှမ်းထားတဲ့အိမ်မှာငါ့အဘွားရှိတယ်။ သူ့ဆီကိုသွား၊ နင့်ကိုဟင်းစားလုပ်ဖို့စောင့်
ညနေစောင်းတော့ ပိုက်ကွန်ဆွဲပြီးပြန်လာတယ်။ အဘွားကတော့ငါးပါလာတာမတွေ့တော့ဘာမှမ
ပြန်လာတယ်။ အဖွားကသူ့ကိုကြည့်ပြီး..မြေးရယ်အဲဒါတွေကမှိုလို့ခေါ်တယ်၊အဲလိုမျိုးတွေ့ရင် သေချာ
အိမ်ပြန်လာတယ်။ အဘွားကတော့ငယ်ငယ်ထဲကချစ်လို့အလိုလိုက်၊ အပြင်လောကအကြောင်းတွေ
ထဲထည့်ရတယ်လို့သင်ပေးတယ်။ နောက်နေ့..ကောင်လေးတောထဲသွားလမ်းမှာ ရသေ့တစ်ပါးနဲ့တွေ့
တယ်။ ရသေ့က၀တ်ရုံအ၀ါရောင်ဆိုတော့ သူကမီးတုတ်မှာမီးရှို့ပြီးရသေ့နောက်လိုက်တော့ရသေ့လဲ
Posted by စန္ဒကူး at 10:12 PM
တစ်နေ့တစ်နေ့၊ မနက်နိုးတာနဲ့ပန်းသီးတစ်လုံးအိတ်ထဲကောက်ထည့်ပြီးရုံးကိုပြေး၊ ရုံးရောက်တာ
နေ့လည်စာစားချိန်ကြလဲမယ်မယ်ရရဘာမှမစားဖြစ်တာကြာပြီ။ ဆရာဝန်မကတော့ပြောတယ်၊ အဲ
ဒီဆေးတွေသောက်ရင်ရင်ပြည့်နေပြီးဘာမှမစားချင်ဘူးတဲ့။ အဲလိုနေလာတာသုံးပတ်ကျော်ပီ။ လူက
အားမရှိတော့ဘူး။ သူငယ်ချင်းတွေကတောင် အသားပိုဖြူလာတယ်လို့နောက်နေကြတယ်။ စားချင်
ခိုးပို့ပေးဖို့ဆွယ်ရတယ်။ နောက်ဆုံးတော့ရောက်လာပါတယ်။ မာမီကမန်ကျဉ်းသီးကြော်၊ဒညင်းသီးနဲ
ဒညင်းသီးကမစားတာအကောင်းဆုံးပါဘဲ။ အနံ့လဲဆိုး၊ ကျောက်ကပ်အတွက်လဲမကောင်း။ စားချင်
တစ်ဆင့်ခြင်းပြောပြထားတော့ ကျွန်မလဲဒညင်းသီးကို မီးသွေးတစ်တုံးထည့်ပြီးအရင်ပြုပ်လိုက်တယ် ပွက်ပွက်ဆူရင်၊ရေတွေအကုန်သွန်ပစ်တယ်။ ပြီးနောက်နှစ်ရည်ထပ်ပြုပ်သွန်ပစ်တယ်။ပြီးမှအခွံနွှာ အထိပ်ကအပင်ပေါက်လေးကိုဆွဲထုတ်။ ပြီးတာနဲ့ဆီပူလေးနဲ့လိမ့်ပြီးစားတယ်။ ကောင်းမှကောင်း။
ရောက်ရင်မစားနိုင်တော့ဘူး။ ဒီမှာချဉ်ပေါင်ပင်တော့မရှိဘူး။ ကျွန်မစိုက်ထားတဲ့အပင်တွေကမြန်မာသူ
ငယ်ချင်းတွေကိုခူးပေးလိုက်တော့ ကျွန်မမှာချဉ်ပေါင်မရှိတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့်ရုံးကအမကြီးတစ်ယောက်
မြက်ရိုင်းကြားမှာပေါက်တာကိုး။ ကျွန်မလဲဝယ်ထားပြီးသားတစ်လားပီးယား ငါးတစ်ကောင်ရှိတာနဲ့
ငံပြာရည်လေးနြဲ့ပုပ်၊ အရေချွံနွှာ၊ လွင့်ပစ် (ငါးအရေခွံ၊ ကြက်သားအရေခွံအခုထိမစားရဲသေးဘူး)အသား
ွှအမကြီးတစ်ယောက်ကခြံထွက်ဂေါ်ရခါးညွန့်လေးတွေခူးလာပေးတော့ ကြက်သွန်ဖြူနဲ့ဘဲ ပလိန်း...
စပ်၊ ကောင်းမှကောင်းပါ..မုန့်ဟင်းခါးထဲထည့်စားတော့ ငံပြာရည်သတ်သတ်ထပ်ထည့်စရာလိုတော့
ဘူးပေါ့...ညီမ၀မ်းကွဲဘူးသီးကြော်တာမ၀ါဘဲနီသွားလို့ရီစရာလေးတွေဖြစ်လို့.... ပဲကြော်ကတော့ တစ်
Posted by စန္ဒကူး at 10:52 PM
နေ့ကိုသိပေမယ့်မကြည့်ဖြစ်ခဲ့ဘူး။ နောက်မှ youtube မှာရှာပြီးကြည့်လိုက်တယ်။ အားကစား
သိပ်စိတ်မ၀င်စားလို့အိုလံပစ်ပွဲတော်ကြီးကိုလဲ miss universe လောက်အသဲသန်စောင့်ကြည့်
ပြသသွားတာတော်တော့်ကိုအံ့သြဖို့ကောင်းပါတယ်။ နောက်ပီးမီးရှုးမီးပန်းတွေလှမှလှပါဘဲ။ တော်
ကိုတော့သတိရမိသား။ မနေ့ညနေကလဲlocal channel မှာသီချင်းဆိုသွားတဲ့ကောင်မလေးက
အခုတစ်လောပေါ်ပြူလာဖြစ်နေတာ မိုင်ကယ်လ်ပဒ် ဆိုတဲ့သူ။ အခုကျွန်မပြောပြချင်တာကတော့
စက်ဘီးစီးပြိုင်ပွဲဝင်ကြတဲ့သူတွေအကြောင်းပါ။ တစ်ချို့သူတွေကတော့ Tour de France ဆိုတဲ့
အကြောင်းကိုကြားဖူးကြမှာပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့လူသိအများဆုံးပွဲစဉ်တစ်ခုပါ။ ဒီနှစ်အတွက်
Tour de France က ဂျူလိုင် ၅-၂၇ ရက်အထိကျင်းပသွားခဲ့ပါတယ်။ ပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေက ကီလို
မီတာ ၃၅၅၀ ကိုစက်ဘီးနင်းရမှာပါ။ အဆင့် (၂၇) ဆင့်ရှိပါတယ်။ အယောက်ပေါင်း ၁၄၅ ယောက်
အဖွဲ့(၁၉)ဖွဲ့မှာပါဝင်ယှဉ်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီနှစ်ပါပထမရသွားတဲ့သူကတော့ ကားလို့စ်စက်စ်ထရီ၊ သူက
၁၉၇၅၊ အေပရယ် ၂၂ မှာ မက်ဒရစ်၊ စပိန်မှာမွေးခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်မအဓိကပြောချင်တာက
တော့ ဘယ်လိုတွေပြိုင်ကြတယ်၊ ဘယ်လောက်လေ့ကျင့်ကြိုးပမ်းခဲ့ရသလဲဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။
ကျွန်မပြောချင်တာက ဒီပြိုင်ပွဲမှာဘယ်လိုကလိန်ကျစ်၊ မဟုတ်မှန်တဲ့နည်းလမ်းတွေသုံးကြလဲဆို
တာကိုပါ။ ဒီနှစ်မှာ စစ်ဆေးရေးဒိုင်သူကြီးများအဖွဲက ပြိုင်ပွဲဝင်သူ (၇)ဦးဟာ မဟုတ်မှန်တဲ့နည်းလမ်း
တွေသုံးခဲ့လို့ ပြိုင်ပွဲကနေထုတ်ပယ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ သူတို့အနေနဲ့အားကစားပြိုင်ပွဲဝင်သူတွေကိုတရာ
- ရင်ကြပ်ရင်ရှု/ဖျန်းသွင်းတဲ့ဆေးဗူး...သုံးရင်ဖြစ်ပါတယ်။ အမှန်ကတော့အဲဒါတရားဝင်ရောင်းချတဲ့
စီဂျင်ကိုအခြေခံထားပြီးဓာဓုပစ္စည်းတွေနဲ့ပေါင်းစပ်ပြီး ဟီမိုဂလိုဘင်ကို ထုတ်လုတ်ပေးတာဖြစ်ပါ
တယ်။ အဲဒီဟီမိုဂလိုဘင်ကိုဘယ်ကရလဲသိလား။ နွားတွေ၊ကျွဲရိုင်းတွေဆီကိထုတ်ထားပြီးတော့လူ့
-နောက်တစ်ခုကတော့ Erythropoietin (EPO) ဒါကတော့ဟိုမုန်းတစ်မျိုးပါ။ သွေးနီဥသယ်ဆောင် တဲ့အောက်စီဂျင်ရအောင်လလူံ့ဆော်ပေးတာပါ။ အမှန်ကတော့အဲဒီဟိုမုန်းမျိုးက သာမာန်အားဖြင့်
Posted by စန္ဒကူး at 10:18 PM
အခုတစ်လောအိမ်ကိုပြန်ချင်တာအရမ်းဘဲ။ နေမကောင်းတာလဲတစ်ကြောင်း၊ စားသမျှခံတွင်း
မတွေ့တာကတစ်ကြောင်း၊ စားချင်တာလဲဒီမှာရှာမရတာကတစ်မျိုး။ အရမ်းကိုပြန်ချင်နေတာ
ရောက်လဲရောက်သိပ်မကြာပါဘူး ဟိုယားဒီယားနဲ့တစ်ကိုယ်လုံးAllergic ဖြစ်တာ..ဘာဖြစ်မှန်းမသိ။
နေ့ကနေစပြီးဝမ်းကိုက် (၃)ရက်လောက်မထနိုင်။ အခုလိုနေ့မျိုးမှာ ဘာတွေသတိရလဲသိလား။
ဒညင်းသီး၊ အင်ဥ၊ ငါးသလောက်ပေါင်း၊ မရမ်းသီး၊ ဇီးဖြူသီး၊ အသေလဲကိုစားချင်နေတာ....ပြန်စဉ်း
ချင်းတစ်ယောက်မေးတာပြန်သတိရမိတယ်။ ဟုတ်တယ်။ အစားစားဖို့အသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူး။
ကအချက်ပေးတယ်။ ငယ်ငယ်က ပွဲဈေးတန်းရောက်ရင်မုန့်လေပွေလေးစားလိုက်ရမှ၊ မုန့်လင်မယား
လေးစားလိုက်မှ ပွဲဈေးတန်းသွားတယ်လို့သတ်မှတ်လို့ရတယ်။ တစ်သက်နဲ့တစ်ကိုယ် ရုပ်ရှင် (၄) ခါ
လားကြည့်ဖူးတယ်။ ရုပ်ရှင်ကြည့်ရင်ပေါက်ပေါက်နဲ့ဖျော်ရည်၊ သောက်ရတယ်လို့ဘယ်သူများအမိန့်
ထုတ်ထားမှန်းမသိဘူး။ ကြည့်တဲ့သူတိုင်းလိုလိုဝယ်တော့ကိုယ်လဲလိုက်ဝယ်ရတာပေါ့။ ရုပ်ရှင်ပြတော့
ဒညင်းသီးကိုတမ်းတတဲ့စိတ်ကတော်တော်ဆိုးတယ်။ ဒညင်းသီးဆိုတာအဆိပ်အတောက်။ လူကိုဒုက္ခ
ပေးနိုင်တယ်...သိရဲ့နဲ့ စားချင်တဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်မရတာဆိုးတယ်။ အဘိုးကိုသတိရတယ်။ အသက်
(၆၀)မှာဘဲဆုံးပါးသွားခဲ့တာ။ သွေးတိုးရှိတယ်။ အစားရှောင်ရမယ်လို့ဆရာဝန်သေချာမှာတယ်။
တည့်တဲ့အစာဆိုအကုန်ကြိုက်တယ်။ တည့်တဲ့အစားတွေဆိုတစ်ခုမှမကြိုက်ဘူး။ပါးစပ်အလိုလိုက်တဲ့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘယ်လိုဆုံးမရမှန်းမသိတော့ပါဘူး။ စားချင်တာကတော့မရရအောင်ရှာကြံပြီးစားနေ
Posted by စန္ဒကူး at 8:31 PM
Posted by စန္ဒကူး at 4:14 AM
Our picture for this weekend was taken byavery good friend of mine while we were trekking up to Mount Hibok-hibok. Our guide told us that this fruit is edible. I was hesitant to take some at first, but after I ate some it, I liked it - so sweet-tasting! I brought lot of these in my backpack pocket to our camp. The Bible said that if Almighty God provided food for the birds of the air. He will surely provide us - His masterpieces, with our needs. He cares for His people (even those who don't know Him) that are made in His own image. He constantly bless us! As result for that blessings we received, we share those to others as well. We are blessed by the sermon this morning telling us that true satisfaction in life is doing the sharing. It has been said that, "a man is contented in his life when he starts doing things not for himself but for others".